मन्दिरमा जुत्ता चप्पल हरायो ? मानिन्छ शुभ संकेत – Khabaarpati
October 18, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on मन्दिरमा जुत्ता चप्पल हरायो ? मानिन्छ शुभ संकेत
काठमाडौँ । तपाईंलाई जुत्ताचप्पलको सम्बन्ध ग्रह दोषसँग पनि हुन्छ भन्ने थाहा छ ? ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनिको सम्बन्ध खुट्टासँग हुने भएकाले ग्रह दोषमा जुत्ताचप्पलको सम्बन्ध रहने गर्दछ।
१) कुण्डलीमा शनिको कुनै दोष वा अढैय्या अथवा साढेसाती चलिरहेको छ भने शनिवारका दिन कसैलाई जानकारी नदिई कालो रंगको छालाको जुत्ता वा चप्पल शनि मन्दिरको प्रवेश द्वारमा खोलेर फर्कनु पर्दछ। तर स्मरण रहोस् छाडेर आएको जुत्ताचप्पललाई फर्केर नहेरी घर फर्कनु पर्दछ । यसले जीवनमा सकारात्मक बदलाव ल्याउने मान्यता रहेको छ ।
२) यदि मन्दिरमा जुत्ता वा चप्पल चोरी भयो भने यसमा कुनै दुखः मनाउ नगर्नुहोला । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार मन्दिरबाट जुत्ताचप्पल हराउनु जीवनमा शुभ संकेतको प्रतिक हो । अझ शनिवारका दिन चोरी भएमा यो झनै शुभ फलदायी हुने शनि दोषबाट राहत पाउने मान्यता छ ।
३) कुनै पनि महत्वपुर्ण काम, परीक्षा, जागिरको अर्न्तवार्ता, छोराछोरीको विवाहको प्रस्ताव लिएर जाँदा वा लामो यात्रामा जाँदा भुलेर पनि फाटेको जुत्ता चप्पल नलगाउनु होला । महत्वपुर्ण काममा यस्ता जुत्ताचप्पल लगाएर जादाँ कार्यमा बाधा आउने मान्यता छ ।
४) घरको मुख्यद्वारमा भुलेर पनि कहिल्यै जुत्ताचप्पल खोल्नु हुँदैन्। घरका सदस्य मात्र होइन घर आएका पाहुनालाई समेत यसो गर्नबाट रोक्नु पर्दछ । मुख्यद्वारको एक छेउ वा र्याक राखेर त्यसमा जुत्ताचप्पल राख्ने गर्नु पर्दछ । अन्यथा सौभाग्य र समृद्धिमा असर पर्ने धार्मीक विश्वास छ ।
५) कहिल्यै पनि जुत्ताचप्पललाई ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्वी दिशामा राख्नु हुदैन । जुत्ता चप्पललाई हमेशा व्यवस्थित ढंगले पश्चिम दिशामा मात्र राख्नु पर्दछ ।
६) घर बाहिर लगाइने जुत्ताचप्पललाई घरभित्र लानु हुदैन । बाहिरको बाहिरै र र भित्रका लागी अलग्गै जुत्ताचप्पल लगाउनु पर्दछ । अन्यथा घरमा राहु, केतुले प्रवेश गर्ने धार्मीक विश्वास रहेको छ । स्वास्थ्यका हिसाबले समेत यो हानिकारक हो ।
७) सकेसम्म घरमा पुराना जुत्ताचप्पल राख्नु हुँदैन। यसले घरमा नकारात्मक ऊर्जा बढाउने गर्दछ । साथै घरमा बिभिन्न समस्याहरु आउने क्रम जारी रहन्छ।
८) घरमा जुत्ताचप्पललाई जतापायो त्यतै फ्याक्नु हुदैन । अन्यथा घरमा तनावको स्थिति आउने गर्दछ । साथै जुन घरमा जुत्ताचप्प्ल छरीएको हुन्छ, त्यहाँ शनिको अशुभ प्रभव रहने गर्दछ । परिवारका सदस्यको मन खिन्न हुन्छ ।
९) कार्यालयमा हमेशा खैरो रंगको मात्र जुत्ताचप्पल लगाउनु पर्दछ। विशेष रूपमा बैकिंग वा शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले यसलाई पालना गर्नु लाभदायक हुन्छ। कार्यालयमा काम गर्नेहरुले कफि वा डार्क ब्राउन रंग उत्तम हुन्छ।